iPhone Data Recovery - Indlela ukuze alulame idatha kusuka iPhone kalula
Indlela ukuze alulame idatha elahlekile kusuka iPhone ephephile & ngokushesha
Njengomuntu fan enkulu ye iOS Amadivayisi, I kufanele ukuba exwayisa wena ukuthi iPhone wakho ingozi ukulahleka kwedatha sifike ngempela. Ngezinye izikhathi uma wena ukuxhumana iTunes, iTunes uzokwazisa ukuthi awukwazi ukuxhumana iPhone yakho bese sicela ubuyisele it ngaphandle isizathu; noma yehluleka ukubuyekeza iPhone yakho; noma Iqalisa phansi okuqhubekayo ne Apple logo. Kufanele ukubuyisela iPhone yakho nge iTunes futhi walahlekelwa yikho konke on iPhone yakho. Iningi kwesikhathi ungalulama ezinye idatha kusuka iTunes isipele ukube wenza isipele nge iTunes, kodwa wena uyobe uthole izinyathelo fussy. Ikhona mathuluzi angakusiza ukuba uthole emuva idatha iPhone ngaphandle iTunes? Yebo yebo, bhekani ukuncomele Wondershare Dr.Fone, a professional iPhone Data Recovery ithuluzi ukuze uthole emuva le idatha kusuka iPhone uma ngengozi ususe noma ohlelweni ishayisana.
Kungakhathaliseki wena usebenzisa iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS noma izinguqulo wangaphambilini, zombili software iPhone alulame idatha sikwazi ukuba uthole ifayela yokusekelayo bese kuqala othintana, SMS, izithombe, imiqophi, ikhalenda, amanothi kanye call umlando in imininingwane, ukuze zibuye kuye ngezidingo zakho, kanye alulame idatha kusuka iTunes isipele.
Ekuqaleni kufanele thwebula bese uyifake.
Ngezansi izinyathelo eningiliziwe nendlela alulame idatha ye-iPhone yakho.
Step 1, xhuma iPhone yakho kukhompyutha
Xhuma iPhone yakho nge computer yakho nge kwedatha ikhebula, abese uqalise Wondershare Dr.Fone. Khetha "Lokulungisa iOS yedivayisi"Imodi.
Uma iPhone wenu iPhone 4s noma iPhone 5, uzothola esibonakalayo evamile futhi nje uchofoze "Qala"Ukuqala ukuskena.
Uma unayo i-iPhone endala, uyothola DFU mode esibonakalayo. Udinga ukusebenza iPhone yakho ngokwezwi iziqondiso interface ukuze wenze uhlelo Ukuskena isiqalo.
Ngesikhathi ushintshele "Fumana idatha yakha iTunes Backup", xhuma iPhone and Wondershare yakho Dr.Fone izoba bhala yonke iTunes zakho amafayela yokugada ingozi iPhone yakho, iPad noma iPod touch okuyinto eyake evumelanisiwe nalo iTunes kule khompyutha ngokuzenzakalelayo. Vele ukhethe elilodwa bakho bese uchofoze “Qala Scan” ukuqala iTunes isipele UKUWUKHIPHA.
Step 2, Idatha ukuskena of iPhone yakho
Ngesikhathi lo analysis ucedzela, Dr.Fone uyobe ngokuzenzekelayo scan idivayisi yakho ye idatha ezilahlekile. ("Alulame idatha kusuka iTunes Backup"Imodi akudingeki ukuhlaziywa idivayisi yakho)
Step 3. Buka kuqala futhi ngokukhetha alulame idatha
Lapho zithwetshulwa eqeda, yonke idatha etholakele ayaboniswa izigaba, like ikhamera roll, stream photo, Photo Library, othintana, imiyalezo, Okunamathiselwe Umlayezo, Call umlando, ikhalenda, Amanothi, izikhumbuzo, memos yezwi and safari isibekisombhalo. Manje, ungakwazi bonke kuqala ngamunye ngamunye ukuze bahlole kungakhathaliseki ukuthi lokho ofuna ukuthola noma cha. Uma ukhethe amafayela udinge ukuthola ukuthola, chofoza nje "Alulame"Inkinobho ukuze uthole idatha yakho emuva.
Indlela ukuze alulame idatha elahlekile emva iOS 7 ngcono
Indlela ukuze alulame imiyalezo zisusiwe iPhone kalula
Indlela ukuze alulame othintana elahlekile kusuka iPhone ngaphandle iTunes
Posted on May 14, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba iOS Data RecoveryAmathegi iPhone Data Recovery, alulame idatha kusuka iPhone, buyisa idatha elahlekile kusuka iPhone
kuba isofthiwe omuhle ukuze alulame idatha iPhone ukuthi ngisuke ngingazi ukuthi !! Ngithathe alulame zisuse imiyalezo iphone, ngiyabonga kakhulu !!
Langaphambilini post Previous: Indlela Dlulisa DVD Ama-Movie ku-Galaxy Tab 3 ajabule?
Next post Next: Indlela ukuze alulame amafayela isusiwe USB Flash Drive on Mac OS X